Nagu saabsan - Codadka Shaqaalaha Galmada VIC
Codadka Galmada ee Fiktooriya Victoria waa mashruuc ay soo saartay Xarunta Michael Kirby ee Caafimaadka Dadweynaha iyo Xuquuqda Aadanaha ee Monash University Melboune inta laga gaarayo Dib-u-eegida Go'aanka ee Kufsiga ee Dowlada Fiktooriya, oo uu gudoomiye u yahay Fiona Patten MP. Ujeeddada laga leeyahay mashruucu waa in la taageero shaqaalaha galmada si loo horumariyo oo loo sharraxo aragtidooda ku saabsan sida shaqada galmada ee go'ay ay u egtahay inay ka dhex muuqato Victoria.
Kirby Center Director & Associate Professor Bebe Loff iyo Adjunct Research Cheryl Overs waxay la shaqeynayaan wakiilo ka shaqeeya galmada Feylasha gaduudan Inc, Dib-u-habeynta Shaqada Galmada ee Fiktooriya, RhED iyo u doodayaasha kale ee xuquuqda galmada. Bebe iyo Cheryl labaduba waxay ahaayeen kuwa u ololeeya shaqada galmada ilaa 1970-yadii.
Bebe Loff wuxuu aasaasay ururkii ugu horreeyay ee ka shaqeeya arrimaha galmada ee Australia intii lagu jiray 1970-yadii. Waxay ahayd xubin aasaasi ka ah dhillayaasha wadajirka ah ee Victoria waxayna xubin ka ahayd guddiga ugu horreeya ee Shabakadaha Mashaariicda Shaqada Galmada. Waxay sidoo kale xubin ka ahayd Guddiga La-talinta Wasiirka ee Shaqada Galmada ee Victoria. Bebe waa garyaqaan la taliye siyaasadeed ka ahaa Waaxda Xeer Ilaaliyaha Guud ee Victoria, wuxuu hagay barnaamijyada sharci dejinta ee wasiirada caafimaadka, wuxuu ahaa sarkaalka xuquuqul insaanka ee masuulka ka ahaa siyaasada AIDS-ka ee Xafiiska Wakiilka Sare ee Xuquuqda Aadanaha ee Geneva wuxuuna xubin ka ahaa oo ka mid ah dhowr guddi anshax oo ay ka mid yihiin tan Ururka Caafimaadka Adduunka. Khibrada Bebe oo ah borofisar sharciga ah iyo 40 sano oo khibrad ah oo ku saabsan dib u habeynta sharciga shaqada galmada waxay siineysaa faham fahansan iyo xirfad gaar ah oo loogu talagalay marin haynta kakanaanta sharciga iyo nidaamyada nidaaminta ee Victoria.
Cheryl Overs waa aasaasaha ururada ururada jinsi ee Australia Prostitutes Collective of Victoria (PCV) iyo Isbahaysiga Scarlet iyo sidoo kale Shabakada Caalamiga ah ee Mashaariicda Shaqaalaha Jinsiga (NSWP). Waxay la shaqeysay shaqaalaha galmada inka badan labaatan dal oo ay ka soo kala direen jaanisyo caalami ah iyo hayadaha UN-ka waxayna si qoto dheer uga qoreen xuquuqda shaqaalaha galmada marka loo eego siyaasada siyaasada iyo barnaamijka. Cheryl wuxuu xubin ka ahaa Guddiga Caalamiga ah ee HIV iyo Sharciga iyo 2012 waxay dhiibtay cinwaan muhiim ah oo ku saabsan shaqada galmada at the Shirka Caalamiga ah ee Aids. Laga soo bilaabo sanadkii 2011 waxay qabatay jagooyin tacliin ah Jaamacadda Monash ee Australia iyo Machadka Daraasaadka Horumarinta Boqortooyada Midowday (UK) oo ay ka bartay shaqada galmada iyo sharciga Kamboodia; Myanmar, Itoobiya, Malaysiya, iyo Fiji oo ay soo saareen caalami khariidadda sharciga shaqada galmada.
Maxuu qabanayaa Mashruuca codka shaqaalaha galmada?
Sida dhamaan ururada shaqada galmada ee Victoria mashruucan wuxuu kor u qaadayaa ka warqabka dib-u-eegista ee ku saabsan shaqaalaha galmada maxaa yeelay waxay leedahay awood ay si weyn u beddesho noloshooda shaqada. Waxaan sidoo kale ururin doonnaa macluumaad si aan u saameynno Dib-u-eegista, fududeynta wadahadalka ka dhexeeya shaqaalaha galmada oo aan la shaqeyno shaqaale kasta oo jinsi ah oo raba taageerada in fikradahooda la siiyo dowladda. Si tan loo sameeyo waxaan leenahay shabakad dhexe oo loogu talagalay dukumiintiyadeena, macluumaadka iyo howlaha ay ku jiraan,
A video of Fiona Pattten oo si toos ah ugala hadla shaqaalaha galmada ee ku saabsan Dib-u-eegista.
A warqad kaasoo soo koobaya macluumaad murugsan oo ku saabsan sharciga iyo fikradaha ku saabsan go'aan qaadashada si loo bixiyo asalka aad u baahan tahay adigoon kubixin saacado baaritaan. Waxay sidoo kale ku siineysaa inta badan macluumaadka loo baahan yahay si loo cusboonaysiiyo waxa dib-u-fiirinta ay fiirin doonto.
An FAQ loogu talagalay qaar ka mid ah su'aalaha ugu badan ee ku saabsan mashruuca iyo hannaanka Dib-u-eegista.
Xisaabaadka warbaahinta bulshada si ay uga ilaaliso shaqaalaha galmada khadka tooska ah.
A sahan ee loogu talagalay shaqaalaha galmada inay yeeshaan meel sahlan oo dhakhso leh oo ay ku galaan Falanqaynta. (ingiriisi ama tarjumid)
Bisha Luulyo waxaan ku marti qaadi doonnaa kulan bulshada ku dhex leh khadka internetka ama websaydha loogu talagalay shaqaalaha galmada si aan uga wada hadalno kala-sooc iyo qaar ka mid ah aqoon-isweydaarsiga internetka ee loogu talagalay shaqaalaha galmada si ay iskood ugu doodo oo uga shaqeeyaan gudbinta.
Haddii la codsado, waxaan ka caawin karnaa shaqaalaha galmada sidii ay u bixin lahaayeen jawaab celin shaqsiyeed iyo waxaan u sameyn karnaa warbixinno ku saabsan go'aan qaadasho buuxda ee ku saleysan khibradda iyo caddeynta.
Markaa hadaad tahay qof hada jinsi ah ama qof hore u ahaa galmo isla markaana aad fikir ka haysatid dhinac kasta oo xukun sharci ah, fadlan sahamiya websaydhka si aad uhesho agabkeena oo arag sida aad uga qeyb qaadan karto.
Maxaad u baahan tahay inaad sameyso?
Si aad uga faa iideysato mashruuca codka shaqaalaha galmada, raac xiriiriyaasheena warbaahinta bulshada ama bartayada websaydhka oo la shaqee qayb kasta oo qalabka ka mid ah marka aan meesha ka saarno. Ku soo biir webinarkeena, xitaa haddii ay tahay oo keliya in la dhageysto dadka kale. U qor soo gudbinta naftaada ama koox asxaab ah una dir Fiona Patten iyo kooxda falanqaynta ee swr@justice.vic.gov.au.
Waxaan rabnaa nooca Fiktooriya ee go'aan qaadis buuxa in laga faa'iideysto dhammaan shaqaalaha galmada tanina suurtagal ma aha haddii dhammaan shaqaalaha galmada ay ku lug yeeshaan hawsha Dib u eegista. Shaqaalaha galmada ee ka socda gobolka Victoria, soogalootiga iyo shaqaalaha ku saleysan wadooyinka gaar ahaan waxay fursad u heli karaan inay fikradahooda ka dhiibtaan dowladda.
Goorma ayay tahay in waxaas oo dhan la sameeyo?
Taariikhda xiritaanka qoraal ahaan waa 17-ka Julaay dib-u-fiirinna waxaa loogu talagalay in ay siiso warbixinteeda iyo talooyinkeeda Dowladda bisha Sebtember.
Waqtiga la tashiga ayaa sida muuqata aad ugu gaaban bulshada shaqaalaha galmada. Mashruucan wuxuu la midoobi doonaa ururada shaqaalaha galmada ee Fiktooriya iyagoo ugu yeeraya dowladda inay ka go'antahay inay yeelato macno, hanaan soconaya oo dhageysanaya shaqaalaha galmada kadib Falanqeynta.
Kumaa wax ku biirinaya Mashruuca codka shaqaalaha galmada iyo sidee?
Feylasha gaduudan waa xarun macluumaad qaran iyo macluumaad macluumaad oo loogu talogalay shaqaalaha galmada oo ujeeddadoodu tahay yareynta iyo yareynta waxyeelada. Shaqaalaha galmada ee ka shaqeeya Red Files Inc. ayaa gacan ka gaystay hubinta in maaddadu ay tahay mid saaxiibtinimo leh isla markaana ay marin u heli karaan shaqaalaha galmada. Shaqaalaha galmada ee 'Red Files' sidoo kale waxay dhiseen websaydhka 'Sex Workers' Voices Victoria '. Haysashada sheyga khadka tooska ahi waa muhiim gaar ahaan marka loo eego masiibada COVID-19.
Dib-u-habeynta Shaqada Galmada ee Fiktooriya waa koox mutadawiciin ah oo madax-bannaan oo madax-bannaan oo ay hogaamiyaan shaqaalaha galmada oo u ololeynayay go'aan qaadista buuxda ee shaqada galmada dadka waaweyn ee Victoria labadii sano ee la soo dhaafay. Shaqaalaha galmada ee ka socda SWLRV waxay u isticmaaleen khibraddooda ku saabsan wareejinta iyo fahamka muuqaalka iyo sharciga siyaasadeed ee Fiktooriya.
Ururka caafimaadka Fiktooriya RhED
RhED waa barnaamij ah Star Health oo bixiya macluumaad caafimaad oo badan, badbaado iyo macluumaad sharciyeed shaqaalaha galmada ee Fiktooriya. Shaqaalaha galmada ee u shaqeeya RhED waxay leeyihiin khibrad 30 sano ka badan warshadaha galmada iyo faham gaar ah, ugu horayn fahamka taariikhda sharciga iyo sida siyaasadu u saamayneyso shaqaalaha galmada.
Shaqaalaha kale ee galmada u dooda
Shaqsiyaadka galmada shaqsiyaadka ah oo magacyadoodu aaney halkan joogin sababao gaar ahaaneed ayaa sidoo kale ku biiriyay mashruuca.